VaMugabe Voenda Kumusangano weChimurenga Vachisiya weKukwezva veMabhizimisi
Chivabvu 05, 2010
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vanonzi vari kumusangano wevakarwa hondo muafrica kana kuti African liberators summit kutanzania kunyangwe hazvo vatungamiri vakawanda muAfrica vari kumusangano weWorld Economic Forum wakanangana nezvekukwezva vemabhizimisi kuti vatange mabasa muAfrica.
Asi mutungamiri wehurumende VaMorgan Tsvangirai pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende VaArthur Mutambara vari kumusangano weWorld Economic Forum uyu.
Mutungamiri weTanzania VaJakaya Kikwete vaparura musangano weWorld Economic Forum vachiti Africa inofanira kurwisa huori.Mutauriri weZanu-PF VaRugare Gumbo vanoti VaMugabe havana hurongwa hwekuenda kumusangano weWorld Economic Forum uyu kunyangwe usiri kuitirwa kure nepavari.
Musangano pakati pakati paVaMugabe, VaTsvangirai naMutambara wekugadzirisa misariridzwa yeGPA watombomiswa. Chief whip weZanu-PF mudare reparamende VaJoram Gumbo vanoti zvakakosha kuti VaMugabe vaende kumusangano yakadai.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zvainge zvakakosha kuti VaMugabe varwe chimurenga chehupfumi kwete kuramba vakabatira pane zvekare.